Big Data Vs Business Intelligence Vs Data Mining - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Big Data, Bhizinesi Njere, Data Mining
Bhizinesi rekuchenjera ndiwo makambani anotora sei ruzivo kubva kune hombe data uye date kuchera. Bhizinesi rekuchenjera inotarisa pakuongorora uye nekumisikidza riripo bhizinesi dhata kuongorora matambudziko nenzvimbo dzekufarira, nepo data science inogadzira mafungire ekufungidzira ezvigadzirwa zvitsva uye hutsva kuburikidza nekushandiswa kwepamusoro maturusi ekuongorora uye algorithms. The Data Science Toolkit yakanyanya kuoma kupfuura iyo Bhizinesi Njere Toolkit, uye data masayendisiti anoshandisa maturusi akadai epamusoro manhamba mapakeji akadai seSQL, Hadoop uye open source zvishandiso zvakadai sePython uye Perl.
Masayendisiti edata anoshandisa maturusi eBI kugadzira, kuunganidza, kuongorora uye kuona data rinobatsira makambani kuita sarudzo dziri nani. Data mining, mishumo uye data dashboards inogadzirwa nevatengesi vakaita sePowerBI neTableau kuti vagadzirise business intelligence zvishandiso izvo zvinopa uye zvinopindura kune zvine musoro zvimiro nenzira iri nyore kunzwisisa.
Data mining itsika yekuongorora data rakaunganidzwa uchishandisa mhando dzakasiyana dzealgorithms kugadzira ruzivo rutsva uye kuwana mapatani. Data Mining inoita kuti iwe ufembere uye uwane zvinhu zvine chekuita nebhizinesi, kuona maitiro edatha, uye kugadzira mitsva yekuongorora uye zviratidzo zve. business intelligence. Makambani anoshandisa date kuchera uye business intelligence kuwana chaiyo data inogona kubatsira makambani avo kuita zvirinani hutungamiriri uye manejimendi sarudzo.
Iyo BI banner inovhara dhata kugadzirwa, dhata kuwanda, kuongorora data uye kuona data matekiniki ekugonesa hutongi hwekambani. Mune mamwe mazwi, BI inosanganisira maitiro akati wandei nemaitiro ekutsigira kuunganidzwa, kufambiswa uye kutaurwa kwedata rekuita sarudzo zviri nani. Mumakore achangopfuura, vazhinji vashandi veBI vakatsiviwa nemidziyo inopa marepoti uye mifananidzo kutsigira danho rekuita sarudzo.
Iyo sisitimu inofambisa kuyerera kwekuongorora uye ruzivo mukati mesangano rinosanganisira advanced database, deta rekuchengeta matekinoroji, madhibhodhi evakuru, mapuratifomu uye maturusi anopa mukana kune data rakagadzirwa nevanoongorora data kune vasiri tekinoroji nhengo dzesangano.
Muzhinji, analytics inosanganisira kudzidza mashandisiro makuru kugadzirisa data uye yemazuva ano IT masisitimu ekuchengetedza uye kuongorora data rakakodzera. Data yesayenzi vadzidzi vanodzidza mashandisiro ezvishandiso zvakawanda zvakafanana zvakashandiswa mukuwongorora data, zvinosanganisira manhamba ekuenzanisira, masvomhu epamusoro, algorithmic programming uye mahombe data system. Pamusoro pemakosi ekutanga mukushandisa masvomhu uye manhamba ekuenzanisa, yekuongorora data vadzidzi vanozodzidza nezvayo date kuchera, maitiro ayo akakodzera data inotaridzwa, kutorwa, kurongwa, kucheneswa, kududzirwa uye kugadzirirwa kuratidzwa.
Kuongorora kwedhata kunoreva chero fomu re data ongororo, kungave mune rakashambadzirwa, dhatabhesi, kana app, nechinangwa chekuona maitiro, kuona anomalies, uye kuyera mashandiro. Kuongorora kwedhata inzira yehunyanzvi umo data rinocherwa, kunatswa, kushandurwa uye masisitimu ekugadzirisa ari kuiswa.
Masangano mazhinji anoda hunyanzvi hwemasayendisiti e data uye vaongorori vezvemabhizinesi kuti vawedzere kushandisa kwavo data hombe. Kuwedzera kwemasvomhu uye ruzivo rweIT runogona kubatsira vanoongorora dhata kugadzirisa vanyorese dhatabhesi uye kuverenga kudzoka pamwe nekugona kudyara.
Mabhizinesi anogona kushandisa guru data analytics masisitimu uye software kuita sarudzo dzinofambiswa nedata kuvandudza mhedzisiro yebhizinesi. Kuongorora kukuru kwedhata kunogona kupa ruzivo rwekutungamira kugona kwechigadzirwa, sarudzo dzekusimudzira, kuyerwa kwekufambira mberi, uye kuvandudzwa munzira kwayo kune mabhizinesi nevatengi. Kunyange ndataura nezve mabhenefiti ezvitoro, business intelligence zvishandiso zvinobvumira makambani kushandisa mabhenefiti edata kwete chete kugashira fungidziro dzekutengesa ikozvino uye ramangwana rinogona kuitika mapatani nemafambiro, asiwo kunzwisisa zvinodiwa nevatengi vavo padanho rakadzama.
guru Data Analytics chiitiko chakaomarara chekuongorora dhata hombe kuti uburitse ruzivo senge mapatani akavanzika, kuwirirana, maitiro emusika uye zvido zvevatengi kubatsira masangano kuita sarudzo dzine ruzivo nezvebhizinesi. Padanho rakakura, matekinoroji ekuongorora kwedhata uye matekinoroji anopa makambani mukana wekuongorora seti yedhata uye kuunganidza ruzivo rutsva.
Kuti kambani yako iite sarudzo dzakangwara, kuona matambudziko uye kuita pundutso unoda maturusi uye nzira dzekushandura data rako kuita zvinobatika. Zvakakosha kuziva mutsauko pakati peBig Data, Data Mining uye Bhizinesi Njere kubatsira kunzwisisa akasiyana bhizinesi data maitiro uye nekuashandisa nemazvo. Nepo bi-analytics ichisanganisira kushandiswa kwedata kutsvaga ruzivo rwunogona kubatsirwa nemasangano, pane musiyano muhombe unofanirwa kugadziriswa.
Bhizinesi Njere vs Data Mining Bhizinesi Njere (BI) ndiyo tekinoroji inotungamirwa maitiro ekushandura data kuita ruzivo rwunoita. BI inosanganisira maitiro ebhizinesi uye nzira dzekuongorora data dzinobatsira kuunganidza data rebhizinesi. Kunyangwe ichigona kutorwa sechikamu chepamusoro, haisi data hombe kana date kuchera, asi iripo mukati mezvainotsanangura se data-based analysis yebhizimisi maitiro.
Data mining inzira inoshandiswa kuburitsa ruzivo runobatsira kubva kune yakabikwa data senge mavhidhiyo, mapikicha uye mafaera kugadzira mishumo inobatsira pakuita sarudzo yesangano. Vaongorori vanogona kushandisa date kuchera kuunganidza ruzivo rwakananga mune chero chimiro, asi ivo vanofanirwa kutevera business intelligence zvishandiso zvekuona kuti ruzivo rwakakosha rwunopihwa sei.
Maitiro ekushandura data rebhizinesi kuita ruzivo rwunogona kutora nguva uye anosanganisira zvinhu zvakasiyana senge data data, masosi edata, matura data, mabhizinesi mamodheru nezvimwe. Makambani anofanirwa kuseta akakodzera zvinangwa uye paramita kuti awane yakakosha ruzivo kubva kune hombe data. Vagadziri vezvisarudzo vanofanirwa kuwana diki, chaiyo data uye kushandisa date kuchera kuona chaiyo data inogona kubatsira makambani avo kuita zvirinani hutungamiriri uye manejimendi sarudzo.
Nedudziro, business intelligence uye date kuchera zvakasiyana, asi vanogona kushanda pamwe chete nekugovaniswa. Muchokwadi, masayendisiti edata uye vanoongorora bhizinesi vanoshanda nedata hombe mune akasiyana asi akabatana mabasa kushandura mbishi data kuita ruzivo runoshanda. Pane misiyano yakawanda pakati pekuongorora data uye date kuchera, asi makambani anogona kushandisa ese ari maviri kana achida kuwana kunzwisisa kwakadzama kwenzira yekuvandudza mhando yavo uye kuvaka hukama huri nani nevatengi.